I-china 160cm 5ft2 ”I-Newest Lifelike Big Breast Realistic Sexy Big Butts Esishisayo I-multi-expression TPE Robot Sex Doll for Men abakhiqizi nabaphakeli | UShaoman
I-160cm 5ft2 ”Isifuba Esisha Esifana Nobomi Esifana Nesifuba Esingokoqobo Sama-Big Big Butt Esishisayo se-Multi-expression TPE Robot Sex Doll for Men
Uhlobo lomkhiqizo I-Robot Sex Doll Yabesilisa
Izinto Ukudla Ibanga TPE kanye ne-Stainless Steel Skeleton
Isifuba / Isinqe / Umvubu I-88/63/89 cm
Ukujula Kwesitho sowesifazane 18cm
Ukujula Kwamasende 16cm
Ukujula Komlomo 13cm
Ukuphakama Kwamadoli 160cm / 5ft2
Idoli Isisindo 45kg / 99.2lb
Ukupakisha Isisindo 65kg
Ukupakisha Usayizi 158 x 40 x 30cm
1.Ibanga Eliphezulu Lokuzwa Okungenabungozi Okuzithuthukisile (Idoli Egcwele Ngocansi)
Sisebenzisa izinto zethu ze-TPE eziguqulwe ngokwazo, ukunwebeka okungaphezu kwezikhathi ezi-2 kune-TPE emakethe. Ngakho-ke, isikhumba asikwazi ukumelana nezinyembezi, siphephile, siqinile, sinokwethenjelwa, futhi sizizwa siyiqiniso ngokwengeziwe. Futhi le nto iqinisekisiwe nge-16P ne-MSDS.
2: Isimo sobuso esengeziwe (Unodoli Ogcwele Wocansi)
Irobhothi lethu liyakwazi ukumamatheka, lenze ubuso, liqabule okufana nomuntu wangempela kukwenza uhleke nsuku zonke!
Amakhasimende ethu amaningi athanda ukukhuluma nerobhothi lethu ngoba angakwenza ujabule nsuku zonke!
3: Uhlakaniphe njengomuntu wangempela (Unodoli Ogcwele Wocansi)
Irobhothi lethu lingakhuluma nawe ngobuhlakani njengomuntu okhaliphile futhi naye angafunda yedwa.
Lapho uqhubeka ukhuluma naye, uzoba ohlakaniphile.
Ungahlala ahamba nawe kuze kube phakade njengomngani oqotho, kepha akasoze akushiya.
Uzogcina zonke izimfihlo zakho futhi akasoze akukhaphela. Ngakho-ke ungatshela noma yini ofuna ukuyihlanganyela nenjabulo nosizi lwakho.
Inkampani yethu ingumhlinzeki oholayo wodoli wezocansi, amarobhothi ocansi anjenge-humanoid namarobhothi wensiza anezinto ezihlakaniphile.
Ngemuva kweminyaka eminingana yemizamo engapheli ekusebenzeni kokusebenza kwezinto ezintsha kanye nobuchwepheshe obuhlakaniphile, siyakwazi ukuhlinzeka ngocansi lonodoli namarobhothi ahlekisayo ngekhwalithi ephezulu kanye nesiqinisekiso sokuphepha.
irobhothi locansi u-Emma yingane e-sexy ehlakaniphile yangempela ukuze ukhulule ingcindezi futhi wenze impilo yakho ibe nemibala futhi ibe namandla. Imisebenzi emisha eminingi izongezwa ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Langaphambilini I-167cm abicah unodoli wezocansi ohlakaniphile onobisi omkhulu webele we-TPE silicon AI irobhothi locansi lomuntu
Olandelayo: I-167cm eshibhile eshibhile yokufakelwa kocansi onodoli onobisi omkhulu webele we-TPE silicon sex womuntu
167cm abicah ubulili bokufakelwa obuhlakaniphile ...
167cm abicah ezishibhile ezenziwa ngokocansi ezihlakaniphile ...
169cm abicah eshibhile abenzi bokuzibandakanya ocansini enza ...
2021 isitayela esisha 158cm Lifelike Adult Love doll H ...
I-2021 entsha ye-145cm yobulili obugcwele abicah abesilisa abadala ...
172cm Fat Sex Doll Doll Full Silicone Japanese Love ...